हरेक दिन एक माछाको बच्चा जन्मिन्छ। तिनीहरू मध्ये एक नहुनुहोस् | ग्याजेट समाचार
बेवास्ता: एक व्यक्ति जो सतर्क छैन र बेपरवाह कार्य गर्दछ।
Úहालसालै हामी हेरिरहेका छौं कि कसरी विभिन्न ईमेल खाताहरू खोल्ने हटमेल o जीमेल। हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि देख्यौं दूत र चाँडै हामी अन्य इन्स्ट्यान्ट मेसेजि programs प्रोग्रामहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हेर्नेछौं। यदि तपाईंले यी लेखहरू मध्ये कुनै पढ्नु भएको छ भने तपाईंलाई त्यो तिनीहरूमा थाहा हुनेछ म सँधै टिप्पणी गर्दछु कि तपाई आफ्नो व्यक्तिगत डेटा को साथ सावधान रहनु पर्छ, पासवर्डहरूलाई सार्वजनिक कम्प्युटरहरूमा बचत गर्न अनुमति दिँदै, र केहि अन्य सुरक्षा सल्लाहहरू। आज म एक प्रस्ताव गर्न चाहन्छु धोकामा पर्न सक्ने तपाइँको डिग्री मापन गर्न परीक्षण.
- पहिलो प्रश्न -
Iम्याग्ना कि तपाईं एक सम्पर्क पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यो केटीको फोटो देखें। तपाइँलाई तलका वर्णनहरू मध्ये कुन सही छ जस्तो लाग्छ?:
a) मेरो नाम DULCE, म २ 23 बर्षको भएँ र म भ्यालेन्सिया (स्पेन) का हुँ र म यहाँ केटाहरू र केटीहरूसँग इश्कबाई गर्न आएको हुँ।
b) मेरो नाम सारा, म २ 28 बर्षको भएँ र म पाल्मा डे मल्लोर्का (स्पेन) बाट छु र म यहाँ साथीहरू बनाउन, शौकहरू साझेदारी गर्न, फोटोहरू / भिडियोहरू साझेदारी गर्न र च्याट गर्न आएको हुँ।
c) मेरो नाम सेलेस्टे, म २ 24 बर्षको भएँ र म बडोना (स्पेन) का हुँ र म साथी बनाउन, केटीहरूसँग इश्कबाजी गर्न, फोटो / भिडियो साझेदारी गर्न र च्याट गर्न यहाँ छु।
d) माथिको कुनै होईन।
एउटा उत्तर छनौट गर्नुहोस् र प्रोप गर्नुहोस्। अब अर्को प्रश्नमा जाऔं।
Iम्याग्ना कि तपाई पुन: सम्पर्क पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहोस् तर अब तपाई अर्को केटी भेट्नुहुन्छ जो धेरै पहिलेको जस्तो देखिन्छ तर यस व्यक्तिको अर्को नाम छ। तपाइँलाई तलका वर्णनहरू मध्ये कुन सही छ जस्तो लाग्छ?:
a) मेरो नाम DULCE, ..bla bla bla।
b) मेरो नाम सारा, ..bla bla bla।
c) मेरो नाम सेलेस्टे, ..bla bla bla।
d) मेरा नामहरू डल्से, सारा र सेलेस्टे हुन्।
त्यहाँ कुनै प्रश्नहरू छैनन् त्यसैले एउटा उत्तर छनौट गर्नुहोस्, किनारमा राख्नुहोस् र हेरौं कसरी परीक्षण बित्यो।
- समाधान -
Lपहिलो प्रश्नको सहि उत्तर हो dफोटोमा रहेको केटीको नाम डल्से, न सारा र न सेलेस्टे भएको छ, उनको नाम रेभेन आर हो र उनी स्पेनिश होइन।
Lदोस्रो प्रश्नको सहि उत्तर पनि हो dकिनकि त्यस केटीको नाम डल्से, सारा र सेलेस्ट पनि हो।
- यो सबैको मतलब के हो? -
Nवा तपाइँ जवाफहरू द्वारा चकित हुनुपर्दछ, अब तपाइँ यी सबैको अर्थ के देख्नुहुनेछ। तपाईंले जान्नुपर्ने पहिलो कुरा यो हो कि यदि तपाईंले अघिल्ला दुई प्रश्नहरू मध्ये कुनै एकमा a,bवा c जवाफ दिनुभयो भने तपाईं एउटा पासोमा पर्नुभयो कि कसैले टेन्डर गरेको छ।
Lदुई फोटो एकै व्यक्तिसँग सम्बन्धित भएकोले, रेभेन आर।, जो इन्टरनेटमा वयस्क मनोरन्जनको व्यवसायमा छ (यो एक महत्वहीन कुरा हो, तपाइँलाई थाहा छ)। कोही तयार छ, वा हुनसक्छ धेरै तयार छ, डेटि site साइटमा केहि व्यक्तिगत पृष्ठहरू सिर्जना गर्न यस केटीको फोटोहरू प्रयोग गरेको छ। यी प्रत्येक पृष्ठमा उनीहरूले फरक व्यक्तित्व सिर्जना गरेका छन जुन तीन केटीको नाम र वर्णनसँग मेल खान्छ जुन हामीले पहिले देख्यौं। यस तरिकाले र आफू को हो भनेर बहाना गरी, उनीहरू सबैको ईमेल ठेगानाहरू प्राप्त गर्दछन् सचेत जो टोक्दछन् र अस्तित्व नभएको केटीहरूलाई सम्पर्क गर्न उनीहरूको ईमेलहरू दिन्छन्। यस पासोको परिणाम निम्न छ:
डुलसले यस महिना १,1398 XNUMX views हेराइहरू प्राप्त गरेको छ र कम्तिमा दुई घोषित फ्यानहरू छन्।
सारा पनि यस महिना 4110११० भ्रमण गरिसकेका छन् र त्यहाँ 32२ जना छन् जसले यसलाई लिएका छन् र उनलाई भेट्न चाहन्छन्।
सेलेस्टेले भ्रमणको संख्या प्रतिबिम्बित गर्दैन, यो लजालु छ कि देखिएको छ, तर उनी संग घनिष्ठ हुन को लागी 15 सूटर्स छ।
Tकान लेखमा प्रयोग गरिएको डाटा वास्तविक हो र ती लाखौं प्रयोगकर्ताहरूको साथ एक सम्पर्क पृष्ठबाट लिइएको हो।
Yतपाईले आफ्नो ईमेल ठेगाना निकाल्न कत्ति सजिलो छ देख्नुहुन्छ। मैले भनेको छैन कि तपाईं सम्पर्क पृष्ठहरूमा जानुहुन्न र तपाईं अन्य व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, म के चाहन्छु तपाईंलाई चेतावनी दिनुहोस् तपाईं होशियार हुनुहोस् र तपाईंले आफ्नो ईमेल कसलाई दिदै हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस्। यी व्यक्तिहरूले तपाईको ईमेल प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने विधिहरूमध्ये यो केवल एउटा हो, फोरममा ठेगाना छोड्ने र मद्दत माग्ने जस्ता त्यस्ता अन्य व्यक्तिहरू छन् जसले आफुलाई ईमेल ठेगानामा सोध्नेलाई म्यानुअल दिन्छन् वा मिल्काइदिन्छन् भन्छन्।
Eअन्तिम लक्ष्य तपाईंको ईमेल इनबक्सको साथ बाढीको लागि प्राप्त गर्नु हो स्प्याम वा केहि नराम्रो हुन सक्छ। अर्को लेखमा म इन्टरनेटको खतराहरू र कसरी त्यसबाट बच्ने भनेर लेख्न सक्छु। यस क्षणको लागि सतर्क रहनुहोस् र सम्झनुहोस्:
हरेक दिन एक मासुको जन्म हुन्छ। तिनीहरू मध्ये एक नहुनुहोस्।
Hअर्को सिरका कटोरा सम्म, एक सिरका नमस्कार र रहन।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » सफ्टवेयर » हरेक दिन एक मासुको जन्म हुन्छ। तिनीहरू मध्ये एक नहुनुहोस्
तिनीहरूले त्यो राख्नुपर्दैन किनकि एकले जानकारी चाहान्छ र त्यो हैन